घट्यो विजुलीको महसुल, अब कति तिर्नुपर्छ ? – Kathmandu Page
घट्यो विजुलीको महसुल, अब कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौँ पेज ४ असार २०७७, बिहीबार ०९:२२
काठमाण्डौ । विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावअनुसार बिजुलीको महसुल समायोजन भएको हो । असार १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेका १३ वटा उपभोक्ता वर्गले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल औसतमा १० प्रतिशतले समायोजना गरिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ ।
यसले गर्दा इन्डक्सन कुकिङलाई प्रोत्साहन पुग्नेछ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल खारेज गरिएको छ । यसले गर्दा यो वर्गको औद्योगिक, व्यापारिक र गैर(व्यापारिक ग्राहकहरुको करिब ६५ प्रतिशतसम्म महसुल कम हुनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको महसुल अत्यन्त सस्तो कायम गरिएको छ । राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको लागि ११ के.भी. को इनर्जी शुल्क रुपैयाँ ४.२० कायम गरिएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रति कि।मी विद्युत खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणभन्दा बढीले कम हुनेछ ।
३ असार २०७७, बुधबार ०७:४७
उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना, तीनजना घाइते
२० असार २०७७, शनिबार १४:४७
गाईले ५ मुख भएको बाच्छो जन्मायो
डोटीको फुलौटमा बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु,३१ जना घाइते
२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०९:४६
रुकुम नरसंहारमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद : प्रतिवेदन
१२ असार २०७७, शुक्रबार १३:४७